HIRPHAAN EENYYUU? – Beekan Guluma Erena
HIRPHAAN EENYYUU?	Beekan Guluma Erena
Personal Category, Seenaa, Uncategorized April 10, 2016April 10, 2016Seenaa ofii	1 Comment
137SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Hirphaa baqqalaa caalchisaa eenyu?
Hirphaan abbaa isaa obbo Baqqalaa Caalchisaafi armee isaa aaddee Bizuu Tirfeessaa irraa Naannoo Oromiyaa Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dirree Incinnii Ganda Buyyamaa Dabballee bakka jedhamu keessatti bara 1982 dhalate. Maatiin inni keessatti dhalate maatii qotee buluudha. Innis umuriin isaa jabbiifi hoolota yeroo eeguu danda’utti hojii kanatti bobba’uun maatii ofii isaa gargaaraa ture. Umuriin isaa barnootaaf geenyaan Mana Barumsaa Magaalaa Incinnii kan sa’atii 1:30 irraa fagaatutti bara 1990 A.L .H. barnootasaa eegale. Yeroo kutaa 1ffaa barachuu jalqabu kana umuriin xiqqoo bilchaatera. Sababiin isaas laftisaa waan fagaatuuf amma of danda’utti ture. Yeruma sanarraa jalqabee barnootasaafi barsiisotasaa kabajuuf iddoo kenna. Utuma kanaan jiruu bara 1993 amantii protestaantii fudhate. Maatiin isaa amantii kana waan hin jaallanneef ofirraa ari’atan. Kana booda xiyyeeffannoo guddaadhaan amantii isaafi barnoota isaa hordofuu jalqabe.
Ta’uyyuu, maatii isaa biraa waan ari’atameef gaafa kaan beela’aa, gaafa kaan immoo dheebochuun galaa isaaf ta’e. nama isa gargaaru waan hin qabneef lafa sa’atii 8:00 deemsisu shonkoraa gateettii ofiitti baatee daldaluu eegale. Akkasumas, yeroo biroo immoo wadaroo (funyoo) micciiruun daldalee of barsiisaa ture. Turtii keessa ba’aan inni baatu gara dhibeetti jijjiirame. Dhiiga tufuu eegale. Ta’uyyuu nama mana yaalaa geessuu waan hin qabneef ittumaan deemee hojjachaa ture. Utuma haala kana keessa jiru kutaa saddeettaffaa isaa xumuree gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaa incinniitti bara 1998 A.L.H darbe.
1998-2000 Mana Barumsaa Sadarkaa Lammaffaa Incinniitti barachaa ture.
2002-2003 Mana Barumsaa Qophaa’inaa Incinniitti barachaa ture.
Bara 2004 irraa eegalee Yuunivarsitii Amboo galuudhaan Muummee Afaan Oromoofi Ogbarruu barachuun bara 2006 eebbifame. Akkuma achiirraa ba’een bara 2007 Yuunivarsitii Bulee Horaatti qacaramuun barsiisaa ture. Bara 2008tti immoo carraa barnootaa argachuun Yuunivarsitii Jimmaa irraa digirii lammaffaa isaa barachaa jira. Walumaagalatti, seenaan jireenyaa Hirphaa bu’aa ba’ii hedduu yoo qabaateyyuu, kaayyoof ciniinnachuun isaa tarkaanfii bareedaa isa tarkaanfachiisaa jira.
• Hirphaan barreessaafi barsiisaaa Yunivarsiitiiti!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa137SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← SODAANIS NI INJIFATAMA!
OROMUMMAA FI HABASHAA!-Seenessoo Gabaabaa-Beekan Gulummaa Irranaa’ti →
One thought on “HIRPHAAN EENYYUU?”	Kayosaf HundeApril 10, 2016 at 8:37 pmPermalink	… akkam ta’uu qaba ture?eenyui sabni guddaan?eenyu afaan guddaan?Suurri kitaabilee armaan gadi kun baazaarii kitaabile mooraa yuuniversiitii finfinne kilo shanitti dhiyaatedha. anis akkuma namaan bitee dubbisuuf dunkaana kana seene. Garuu dubbiin faallaa natti ta’e,dunkaana lamatu jira. dunkaana jalqabaa seenee bitaaf mirga ilaalaa gaaraa hamma godaatti waanan arguu barbaadu nandhabe. tariiti kun kan isaaniiti jedheen ariitiidhaan gara isa itti aanuutti darbe. Achis yeroon seenu gaaffiitu nahudhe ergan naannaa’aa oolee gaddaan walitti cabee anaa ba’uuf ka’un gurgurtaa kitaabilee afaan oromoo tokkittiin arge. ishuma bira dhaabadheen ija keessa ilaalaa rakkooko waanan itti himadhun fakkaadha. Imimmaan Oshwiitzii btadhee aariis dabaladheen adeeme. Hawaasni guddaan, afaan guddaan eenyu? Hayyootaafi abbooti qabeenyaa Oromoo ta’aniif.1. Bakki raabsaafi gurgurtaa kitaabilee finfinnee keessa maaliif dhibe?2. Manni leenjii aartii Oromoo maaliif dhibe? moo manuma dhugaatiifi Mana foonii qofa baayyisuutti walhaadorgomnu?